Ice izinaliti - mkhuba asemkhathini, okuyinto ngokuphindiwe okubonakale eRussia nakwamanye amazwe. Ngezinye izikhathi uze abizwe nangokuthi izibani enyakatho, kodwa imiqondo ehlukene. Kuyini ice inaliti? Benziwa kanjani it is?
imihlola Atmosphere nasemvuleni
Isibhakabhaka iyona udonga lwangaphandle iplanethi futhi yakhiwa nenye amagesi ezahlukene. Kuyinto njalo zikhona izinqubo zemvelo namakhemikhali ukuthi anqume imibandela sezulu eMhlabeni. Ukubonakaliswa ebonakalayo yalezi zinhlelo ubizwa ngokuthi izenzakalo ozungeze umhlaba wethu.
spectrum yabo ubanzi kakhulu futhi kuhlanganisa kokubili ajwayelekile kithi imihlola (imvula, iqhwa, isichotho, isithwathwa, amazolo, squall, isiphepho nokunye. D.), Futhi kuyinto ngempela ezingavamile (halo, izingongolo welanga). imihlola Ngokuvamile ovelele optical kagesi kanye, futhi hydrometeors litometeory.
Ice inaliti iphathelene hydrometeors noma kwezulu. Ziyakwazi amanzi ngefomu okuqinile noma uketshezi, ukhululeka emoyeni noma lehla aphume amafu. Hydrometeors - ke iqhwa, iqhwa, lina, kunenkungu kanye nezinye izenzakalo ezihlobene ngamanzi. Ingathinta sezulu kanye kwesimo sezulu ezingxenyeni ezihlukahlukene zezwe.
Abantu abaningi baye okungenani kanye ngiphuphe kokubona aurora. Ukuze wenze lokhu, zingabantu ngisho ukuhamba eduze izingongolo. Kodwa kukhanya kwesibhakabhaka akuyona kuphela zindawo eziphakeme. Isizathu salokhu kungenzeka inaliti ezineqhwa, okuyinto engazi futhi kuthiwe Northern Lights. Yiqiniso, lezi zenzakalo bahluke ngokuphelele kanye nemigqondo, futhi imvelaphi.
ice izinaliti mkhuba lubonakale emini nasebusuku. I kwelanga bona ziyakhazimula esibhakabhakeni nje uthanda icicles. Ebusuku, ebonakaliswa ifomu amakhulu ezinemibala ikholomu elikhanyayo, khomba kunonyezi futhi izibani. Zibonakala kahle esibhakabhakeni ebusuku, njengoba akhiqizwa sezulu ecacile.
Enye igama lesi simanga - ice uthuli. Emibhalweni yezinye izizwe futhi ibizwa nangokuthi i idayimane uthuli. It kuvela phakathi frost ebusika, lapho izinga lokushisa lehla kuya 10-15 ngaphansi kwezingaqhwa. Eminyakeni yamuva, uthuli ezineqhwa ngaphezu kwesikhathi esisodwa ebonwe Ufa, Tyumen, eMoscow, ensimini ka-Ukraine futhi Belarus. Ngokuvamile, into kwenzeka ezindaweni Arctic.
Ice izinaliti kukhona kwezulu okuqinile futhi, njengoba umthetho, alotshwe ngu ababikezeli bezulu. Lokhu ezincane ice zinhlayiya bunjwa eziyisithupha, iziphi ejikeleza emoyeni. ubungako bawo ingeqi eyodwa milimitha. Isendlalelo ice kwesihenqo ifinyelela kusuka ngamamitha 15 kuya 350. Isizathu ngoba ivela khona kuyinto kombhala lokushisa.
Ngokuvamile, ukuphakama lokushisa air incipha, okungukuthi, e-surface Zomhlaba ke ufudumele kuka amakhulu amamitha ngenhla. Ngaphansi kwezimo ezithile, izingqimba nge okushisa ahlukene kungayishukumisa, okuyinto kubonakala ezihlukahlukene izimo asemkhathini, ezifana inkungu.
Ice ifomu inaliti lapho abandayo futhi izingqimba okuxubile efudumele eduze kwamanzi. Kubalulekile ukuthi emoyeni kwaba ngempela ezinomswakama. Umhwamuko kusukela ungqimba efudumele is selehlile ngaphansi kwethonya okushisa aphansi futhi yakha ice zinhlayiya ngesimo izinkanyezi noma izinaliti.
Ngokuvamile, into enjalo akuyona kakhulu ziphazamise ukubonakala. Uma lokuhlushwa ice izinaliti emkhathini sikhulu kakhulu, umphumela inkungu ivela. Ibizwa ngokuthi ice ufasimbe. Kulokhu, ukubonakala ingamakhilomitha angu esingaphansi 10.
European Echibini ufudu.
Ukujula iBaikal: 1637 amamitha amanzi ambiwa phansi amsulwa
Monkey into encane: okuncane mayelana indlela yokuphila semvelo ekuthunjweni
Acacia ophuzi - isitshalo akudingi yesondlo
Chinese "Lotus umlenze" - lizinga ubuhle noma esifuze esinonya esidlule?
Dinosaur amathambo. Indawo egcina amagugu esizwe nge amathambo ka izibankwakazi
Ayikho Elomuntu Sky, nokwenza: izici, ukubuyekeza kanye nezincomo
Ukukhetha umshini ingane izihlalo zabakhubazekile
Nightclub Okudumile e Saratov
Umuthi 'Piperazine'. Yokusetshenziswa
Isenzo has. Isenzo babe / has: imithetho kanye umzimba
Ama-antibiotic "Amoxil": yokusetshenziswa, ngempela
"Pimafutsin" ngesikhathi sokukhulelwa: ukubuyekezwa, izinkomba kanye nemiphumela engemihle
Kuqakatheke ngani ukuvikela ncwadi? Ngiceleni lo mbuzo kuphela abafundi?
Tanks and "Chevrolet Blazer" Yini ukuba ungesabanga ngokudlulisa
Umsoco irayisi abilisiwe, ensundu. Figure: Umsoco 100 g ngalinye